Naya Bikalpa | कोरोनासंग लड्न र जनस्वास्थ्यको जगेर्ना गर्नका लागि सजगता र जनचेतना जरुरी - Naya Bikalpa कोरोनासंग लड्न र जनस्वास्थ्यको जगेर्ना गर्नका लागि सजगता र जनचेतना जरुरी - Naya Bikalpa
कोरोनासंग लड्न र जनस्वास्थ्यको जगेर्ना गर्नका लागि सजगता र जनचेतना जरुरी
प्रकाशित मिती: २०७६ फाल्गुन २७, ०६: ४३: ५८
१.नोभेल कोरोना भाइरस २०१९ अर्थात् कोभिड—१९का खासै संक्रमित व्यक्ति नेपालमा अहिलेसम्म नभेटिए पनि कोरोनाको त्रासको भाइरसले भने नेपाललाई नकारात्मक असर पार्न थालेको छ ।
उद्योगमा कच्चा पदार्थको कमी, मुख्य तया जल विद्युत क्षेत्रको निर्माण तथा भारतको ओखती जगेडा राख्नका लागि निर्यात नगर्ने कडा नीतिका कारणले ओखतीको आपूर्तिमा गाह्रो देखिन थालेको छ । हुन त भारतले आफ्नो सहयोग रहिरहने बताएको छ र सरकारले पनि ३ महिनाका लबगि आवश्यक ओखती जहिले पनि जगेडा रहेको बताएको छ ।
२.कोभिड—१९ले गाँज्नु भन्दा पहिले नै सन्त्रासले गाँजेको छ । यसवारेमा सजगता पक्कै पनि आवश्यक छ, त्यो पनि सरकारी प्रयासदेखि जनस्वास्थ्यको तहसम्म नै । जनतको व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरु केही हुन सक्दैन ।
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि नै जनताले चुनेर शासन गर्न पठाएका हुन् जसले जनतको सेवालाई सर्वोपरि ठानून् । झन अहिले त तीन तहका सरकार छन् । नीति बनाउन, योजनाबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनको परिणाम तत्काल थाहा पाउनका लागि ।
३.भोलि महामारी हुनभन्दा अहिले नै सजगता अपनाउनु पर्छ र दुर्गम तर जाडो क्षेत्रहरुमा बेलैमा आवश्यक सजगता अनि ओखतीको प्रवन्ध आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा त झन घना आवादी भएकाले यदि कोरोना भाइरस प्रवेश ग¥यो र अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्यो भने यसले गर्ने क्षति अचिन्त्य हुनेछ । यसवारेमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र तथा सबै नेपाली जनता आफैँ सजग र सतर्क हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
४.चीन जस्तो सुविधा सम्पन्न देशमा र प्राविधिकरुपमा दक्ष जनशक्ति भएको देशमा त यसले महामारीको रुप लियो भने हामीलाई त यसले राष्ट्रिय सङ्कट नै उत्पन्न गर्नेछ । हुन त हामीले वुहानबाट आफ्ना नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरेका छौँ र ती आएका १७५जनामा कुनै पनि प्रकारको संक्रमण नरहेको प्रमाणित भएर सबै नै घरघरमा पुगेका छन् ।
अरु पनि स्वैच्छिकरुपमा जँचाउन गएका छन् र कुनै पनि प्रकारको लक्षण देखिएको छैन भनिएको छ । सरकारले अहिले जुन संक्रमण हुनुभन्दा पहिलेको तदारुकता देखाएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ र पनि बजारमा देखिन थालेको कृत्रिम अभावको भने राम्रोसँग अनुगमन हुन सकेको छैन ।
५.कोरोना भाइरसका वारेमा सम्भवतः सन् १९७१ तिर नै (पहिले पनि ) अनुसन्धान भएको रहेछ र पशुपन्छीबाट नै सर्ने प्रमाणित भएको रहेछ । तर मानिसमा जुन संक्रमण भएको अहिले पाइयो, यसवारेमा अनुसन्धान पनि हुँदैछ र खासै ओखती पनि पत्ता लागेको देखिँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले केही हप्तामा नै ओखती पत्ता लगाउने विश्वास त दिलाएको छ तर त्यसको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकेको छैन । अमेरिकाले पत्ता त लगाउला तर त्यसको खर्च कसरी सर्वसाधारण विश्वका जनताले बेहोर्न सक्लान् भन्ने डर उत्तिकै देखिन्छ ।
६.नेपालमा यसको असर नेपालभित्रै खासै नपरेको देखिए पनि विश्वका अरु देशहरुसँगको सम्बन्धले भ्रमण वर्ष २०२०मा धक्का लागेको छ र नेपालले आवश्यकता हेरेरमात्र विदेश भ्रमणका लागि जान, सकेसम्म टाढाको भ्रमणमा नजान र चीन, कोरिया, जापान, इरान जस्ता देशमा नजान सचेत गराएको छ । इरानमा त जेलमा रहेका कैदीहरुसमेतलाई अस्थायीरुपमा जेलमुक्त गरिएको छ । नेपालमा पनि केही निदानात्मक कदम चालिन थालेको देखिन्छ ।
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा चैत्र ६ बाट सुरु हुने हुँदा चैत्र ५ सम्ममा कक्षा १ देखि ९सम्मको अन्तिम परीक्षा सकेर लामो विदा दिनका लागि विद्यालयहरुलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको समाचार आएको छ । त्यसअघि नै विश्वविद्यालयहरुका स्नातकोत्तरका परीक्षा हुँदैछन् र १० कक्षाको अन्तिम परीक्षा लगत्तै कक्षा १२ र ११को अन्तिम परीक्षा हुँदैछन् । परीक्षाको यो वृत्त बर्सैभरि चलिरहन्छ र भीडभाड पनि त्यहाँ हुन्छ ।
मानवीय स्वास्थ्यको जगेर्ना गर्नका लागि पूर्व सचेतना अपनाउँदा धेरै कुरामा ध्यान पनि पु¥याउनु पर्छ र कतिपय कुरामा भावी दिनको तयारीका लागि सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । परीक्षाको औपचारिकताका विकल्पहरु छन् तर मानवीय विपत्तिको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन । कुनै पनि सरकारको पहिलो कर्तव्य हो जनताको व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु । परीक्षा फगत एउटा औपचारिकता हो , त्यो पनि कुनै अर्को निर्णयले सुधार गर्न सकिन्छ ।
७.मुलुक भनेको जनता हो । जनताको व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्यको वारेमा चिन्ता लिने भनेको सरकारले नै हो । जनताले कतिपय कुरामा पहुँच राख्दैनन् तर सरकारले पहुँच राखेकै हुन्छ । यस्ताबेलामा जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरुमाथि सरकारले कडा व्यवहार पनि गर्नुपर्छ । डाक्टरहरुको स्वास्थ्यमाथि पनि झन खतरा हुन्छ ।
जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने डाक्टरहरुलाई सुविधा र वास्ता नगर्नेहरुलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ । यहीबेलामा भएका मास्क पनि लुकाउने र बढी मूल्य लिने चलन पनि देखिन थालेको छ । यसैलाई भनिएको हो जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड भनेर ।
त्यस्तो कुनै ओखती त छैन तर तातो पानी पिइरहने, हात साबुनले धोएरमात्र केही चीजमा छुने, अरुले छोएको चीजमा सकेसम्म ग्लोब लगाएर छुने, हात नमिलाउने, नमस्कार गर्ने, अभिवादन गर्ने अनेक अरु परम्पराहरु छन्, तिनको प्रयोग गर्ने, लिफ्टमा जाँदा आउँदा तलाको अङ्क थिच्दा आफ्नो पेन वा कुइनाले थिच्ने, ढोका उघार्दा वा ह्यान्डिल उघार्दा रुमालको प्रयोग गर्ने र मास्क लगाएरमात्र बाहिर जाने गर्नु उचित हुनेछ ।
८.अर्थात् सचेतनाका अनेक उपाय अपनाउने गरौँ भनेर एकले अर्कालाई सिकाउने पनि गर्नुपर्छ । विद्यालयमा यदि यो भाइरस भाइरल भयो भने वा यसले साना साना बालबालिकामार्फत् यो संक्रमण समाजमा व्यापकरुपमा फैलियो भने यसको परिणाम कस्तो होला ? कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
बृद्धबृद्धाहरुलाई बढी नै सताउने हुनाले यसपटक परीक्षा नलिएर पनि कक्षा बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्न सकिन्छ । सामुदायिक स्वास्थ्य बचाउनका लागि केही कुरामा सम्झौता र रणनीतिक उपाय पनि अपनाउनु पर्छ । वार्षिक जाँच चाहे त्यो विद्यालयमा होस् या विश्व विद्यालयमा होस्,त्यसको विकल्प भनेको कक्षोन्नति गरेर पनि सम्भावना पैल्याउन सकिन्छ जुन कोभिड—१९को महामारी समाप्त भएपछि पनि हुनेछ ।
९.कोभिड १९को कति विस्तार हुने हो भन्ने कुराको वारेमा अहिल्यै भन्न हतारो हुनेछ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको धारणा छ । झन हामीले त कसरी भन्न सक्छौँ र ? मात्र हामीले सचेतना बढाउने र जोगिने हो । सबै भाइरसले संक्रमितहरु मर्ने त होइनन् , अहिलेसम्म करिब १ लाख व्यक्तिमा यो भाइरसले संक्रमण गरेको र करिब ३हजार ५ सयभन्दा बढीकोे मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।
यसको अर्थ हो करिब ३ .५ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । यसको संक्रमणबाट पनि मानिसहरु मुक्तभएर सामान्य जीवन यापन गरिरहेका छन् । तर पनि यो जसरी भयानक तरिकाले विस्तारित भइरहेको छ, त्यसले देखाउने भयानक तस्बिरचाहिँ डरलाग्दो छ किनभने यो सन्त्रासको नाममा परिणत भएको छ ।
१०.यो विश्वको स्वास्थ्य समस्या भएको छ र हामीले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै विश्वका अरु देशलाई पनि कसरी यसबाट मुक्त हुन सहयोग गर्न सकिन्छ, गर्दै जाने नीति लिनु पर्छ । निरन्तरतको सजगता र पूर्व सचेतना नै यसबाट मुक्त हुने उपाय हो । यसलाई सामान्यरुपमा पनि लिऔँ र भयानकरुपमा पनि लिआँै । सामान्य यसकारणले कि यो रुघा खोकी र ज्वरो हो, असामान्य यसकारणले कि यो महामारीको रुपमा देखियो ।
११.यो कोभिड १९ संक्रमण चीनको मात्र समस्या रहेन । न त चीनले यसको उत्पादन गरेर निर्यात गरेको हो । चीन स्वयं यसको मारमा परेर अरबौँ डलरको क्षतिमा परेको छ । जनस्वास्थ्यमा देखिएको समस्याले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा परेको बेला छ ।
१२.चीन आफैँ जनस्वास्थ्यका मामिलामा सजग र सक्षम देश हो र पनि अन्यौलग्रस्त किन भएको हो भने यो संक्रमण यसरी बढेको छ कि कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने समस्या देखिएको छ । अब यो विश्वका ७७ देशमा फैलिँदा अरु देशहरुमा पनि संक्रमित हुँदैछ र यसमा चीनबाट जानेहरुकै कारणले यस्तो फैलावट भएको मानिएको छ ।
१३. र अन्त्यमा, सजगताका साथ कोरोना भाइरससँग जुधौँ । सकेसम्म त्यसको प्रभाव नपरोस् भनेर सतर्क होऔँ , भई हाले एकान्त जीवन यापनबाट त्यसमाथि विजय हासिल गर्ने विधि अपनाऔँ । अहिले संक्रमणको त्रास भन्दा हल्ला र सम्भावित परिणामको सन्त्रासले संसारलाई पिरोलेको छ । कम्तीमा पनि नेपाललाई कोरोना मुक्त क्षेत्र बनाउन दैनिक जीवनको अनुशासनले ठूलो काम गर्नेछ र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा सबैले ध्यान दिएमा मुलुक नै स्वस्थ हुने सम्भावना देखिन्छ ।
२०७६ फाल्गुन २७, ०६: ४३: ५८